Home Wararka Maxay Madaxda Afrika ugu Dhaggan yihiin Doorasho Qof iyo Cod ah?
Maxay Madaxda Afrika ugu Dhaggan yihiin Doorasho Qof iyo Cod ah?
Marka dadku ay maqlaan doorasho qof iyo cod ah waxay u qaataan inay hirgaleyso wadaag saxan ee kuraasta lagu tartamayo iyo inuu soo baxayo qofka ugu wanaagsan oo ay demoqraadiyad higaleyso, runtuse taas maah. Waxaan mid mid u fiirineynaa dimoqraadiyadda iyo doorashada qof iyo cod ee waddamada geeska Afrika sida Itoobiya, Ugandha, Jibuuti, Rwanda iyo Kenya.
Sida aan ka warqabno waxaa hadda Itoobiya ka dhacday doorasho qof iyo cod ah inkastoo Tigray ka maqneyd, haddana waxaa la qabtay doorashadaas. Doorashada waxaa ku guuleystay hogaamiyaha dalka oo isagu doorashada qabtay, kaas oo sheegtay inuu helay 410 kursi dhammaan kuraastii loo tartamayey ee ahayd 436, taas oo macnaheedu yahay 94% inuu doorashada Abiy Axmed ku guuleystay. Shakhsigii la tartamayey ayaa waxaa uu dacwad ka furay 207 goobood oo laga codeynayey inay wax is daba marin ka dhacday.
Waxaan hambalayada kala daahin ardaygiisa Maxamed Cabdullahi Farmajo oo si degdeg ah ugu hambalyey intaan looga horamrin waxa uu ku sheegay guusha taariikhi ah ee uu Dr Abiy gaaray.
Haddaba waa maxay sababta ay Afrikaanka u jecel yihiin doorashooyinka la yiraahdo qof iyo Cod, kadib markii ay dadku iska diideen afgambiyadii Casgareed ee xooga tooska ah dalka loogu haysan jiray?
In badan waxay u arkeen in doorashadaan loogu yeeray qof iyo cod in sidii la rabao ay maamulan karaan si ay ugala soo baxaan jawaabta ay rabaan. Tusaale madaxda waddamada Geeska ku yaalla waxay talada ku fadhiyaan muddo dheer, iyagoo ku gabbanaya doorasho qof iyo cod ah.
Yuweri Musaveni 34 sano oo uu mar waliba ka soo saaranayey doorashada qof iyo cod jawaabta uu rabo oo ah dib u doorasho joogto ah.
Ismaciil Cumar Geelle 22 Sano.
Paul Kagame 21 Sano.
Kenya iyada waxa xoogaa ayey dhaantaa inkastoo la isku dilay ayaan dhoweyd, waxaa kaloo ka duwan Afawerki oo xoog ku jooga ciddii hadashaana ay qaran dumis tahay lana khaarijiyo.
Waxay Madaxdan aan soo sheegnay dhamaantood ku joogaan iyagoo leh waxaan qabannay dorasho qof iyo cod ah oo waxaa na loo kugu codeeyey doorashadaas, waana sababta uu Maxamed Farmajo u rabo inuu hal mar helo doorasho qof iyo cod si uu u yiraahdo shacabka ayaa I jecel. Gacmgacmeynta doorashada noocan ah waa sahlan tahay marka loo eego teenna oo hadda ku dhisan 4.5, waana ka caddaaladsan tahay. Caddaaladda mararka qaar kala badnaan maaha ee waa in waxa la helayaa loo qeybsadaa sida ugu macquulsan.
Ogaada dad badan oo hadda ka qeylinayaa hannaaka ay wax noogu dhisan yihiin sida Dhalxa iyo qaar kale waxaa muuqata ama inaysan fahmin ama inay is yeel yeelayaan.
4.5 Wuxuu keenay inay barlamanka soo galaan dad aan soo gali lahayn haddii qof iyo cod la aadi lahaa waayo dadkeenna weli kama korasana qabiika. Haddii doorashada sanaadiiq la dhigo laba mid ayaa si fudud u dhaceyso inuu wada qaato qabiilka tira ahaan ku badan degaakaas ama cidda abaabuleysa sida wadamo badan oo ka dhacda inay wada qaataan kuraasta dowladdaha doorashooyinka qabanaya sida hadda ka dhacday Itoobiya. Abiya iyo Xisbigiisa ayaa 94% kuraasta wada helay qof waliba oo caqli leh waa garan kartaa in uu soo farsameeystay natiijada doorashadaan waana waxa uu Farmajo ku riyoonayo inuu maalin gaaro.
Xaqiiqdii marka loo eego waxa ka dhaca waddamada aan soo sheegay ee tusaalaha iyo hiigsiga u ah Farmajo waa arrin cabsi leh oo haddey dhacdo abuuri doonta kalitaliye la siman Musaveni, Geelle, Kagame iyo Abiy oo isaga hadda jidka jeexday Farmajana uu ku taamayo inuu ku daydo, kalana shaqeyn doona.
Guusha uu Abiy soo diriqsaday waxay Farmajo gelineysaa Rajo ah inuu ku daydo oo isagana diriqsado doorashadaan waana sababta uu hadda geed dheer iyo mid gaaban ba uu ugu fuulayo inuu helo awood iyo hab uu ku musuqmaasuqo guddiyada si ay u soo baxdo qaab uu ku soo noqdo hadda, kadibna uu u yiraahdo waxaana qabanayaa muddo dhow doorasho qof iyo cod ah, taas oo dad badan oo aqoon lahayn ay sax u arkaan maanta berrisa la wada eedi doono.